Banyere Anyị - Zhejiang Feileisi Ọdụdọ Co., Ltd
Auto wiring njikota
Zhejiang Feileisi Ọdụdọ Technology Co., Ltd. e guzobere na 2008, bụ ọkachamara emeputa nke akpakanamde relays, flashers, switches, sensọ, DC contactor, wiring njikota ndị ọzọ akpakanamde eletriki ngwaahịa.
The ụlọ ọrụ gafere ISO / TS16949: 2009 quality usoro asambodo na 2015. The ngwaahịa gafere nnyocha na Ningbo akpaaka akụkụ testing center, nwetara SGS-RoHS asambodo, European Union OA asambodo na etinyere maka ọtụtụ nke ngwaahịa nchọpụta Kemịkalụ.
The ụlọ ọrụ "FOOCLES" ika, "FEILEISI" ika na ngwaahịa, na-kwadoro site na ya anụ àgwà na magburu onwe-eri-irè na ahịa. E exported na Europe, Amerika, Middle East, Southeast Asia na n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa. Site unremitting mgbalị nke ndị ọrụ niile, na "FOOCLES" Brand bụ maara nke ọma na akpakanamde eletriki ụlọ ọrụ nzọụkwụ site nzọụkwụ.
Obi ụtọ na-welcome enyi si n'ụwa nile na-abịa ileta anyị ụlọ ọrụ, kpakorita azụmahịa, ike oru nkwado, anyị ga-enwe obi ụtọ na-ejere gị ozi.
na nnyocha iwu, marking, nkwakọ, nchekwa na nchekwa nke n'ozuzu nzube relays maka ụgbọala. Nke a ọkọlọtọ na-emetụta akpakanamde DC circuit n'ibu kọntaktị akpa relays (gụnyere nkwụnye smal ...
E-Address Zhejiang FEILEISI eletriki Technology CO., LTD.
Ekwentị: + 86-577-61755310